Hon. Edmund Bartlett dia manao majika ho an'ny vahoaka Jamaikana sy ny fizahantany manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Hon. Edmund Bartlett dia manao majika ho an'ny vahoaka Jamaikana sy ny fizahantany manerantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
“Vitanao io!” tokony ho valin'ny Minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett. Na eo aza ny fampitandremana mafy momba ny dia sy ny valan'ny COVID tamin'ny tsenan'ny loharanom-baovao lehibe any Jamaika - Etazonia - nahavita nanoratra isa betsaka ny fizahan-tany ny firenena. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany tsara tantana ary azo antoka dia toa mandeha tsara, na eo aza ny toe-javatra tsy azo atao.
Nahazo $ 1.2 miliara dolara amerikana tamin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika 1.1 tapitrisa i Jamaika hatramin'ny nanombohan'ny taona.
Raha ny filazan'ny UNWTO dia nahazo i Jamaika tonga eo amin'ny 4.23 tapitrisa ny mpitsidika iraisam-pirenena amin'ny taona 2019, ary 800,000 2020 ihany amin'ny taona XNUMX rehetra.
Mpitsidika 1.1 tapitrisa ao anatin'ny 9 volana amin'ity taona ity dia zava-bita mahafinaritra, fandefasana indray ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Jamaika mandritra ny fotoana tsy azo atao.
Ny tarehimarika farany dia nambaran'ny minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett, ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fampahalalam-baovao ao Jamaika, "Think Tank," ao amin'ny biraon'ny masoivoho any Kingston ny talata teo.
"Io fampisehoana io dia mahita fiakarana 22 isan-jato amin'ny vola azontsika, tafakatra 212 tapitrisa dolara amerikana, ary ny fahatongavanay dia niakatra hatramin'ny 800,000 tamin'ny taona lasa ka lasa 1.1 tapitrisa tamin'ity taona ity," hoy izy nanamarika.
Nilaza izy fa ny ankamaroan'ny mpitsidika ny nosy dia avy any Etazonia (Etazonia), satria ny tsena hafa toa ny United Kingdom (UK) sy Canada dia misy fameperana isan-karazany momba ny coronavirus (COVID-19), izay nanakana ny olona tsy hivezivezy.
Nasongadin'ny minisitra Bartlett fa amin'ny fitomboan'ny karama sy ny fahatongavan'ireo mpitsidika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny aorian'ny areti-mandringana ny firenena.
"Nentinay niverina tamin'ny asany ny mpiasa maherin'ny 60,000, izay very vokatry ny areti-mandringana," hoy izy nanamarika.
Nilaza izy fa "malina" ny indostria amin'ny fizotran'ny fanarenana COVID-19 ary mifantoka amin'ny faharetana "ho ivon'ny lalana mandroso."
"Noho izany, tsy misy indostria tsara kokoa hampiakarana ny vola miditra ho an'i Jamaika, hamerina amin'ny laoniny ny asa ary hiteraka fotoana vaovao amin'ny fiarahamonina manerana ny firenena noho ny indostrian'ny fizahantany," hoy ny minisitra Bartlett.